ओली कमरेड ! तपाई निसन्तान हुनुमा प्रचण्डको के दोष ? -
ओली कमरेड ! तपाई निसन्तान हुनुमा प्रचण्डको के दोष ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २६ पुष आईतवार
जनताले दिएको ठूलो आशा र भरोसा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ३ वर्ष नपुग्दै धुमिल भएको छ। प्रधानमन्त्री पद जोगाउन ओलीले नेकपा मात्र फुटाएनन्, विदेशी शक्तिको इशारामा प्रतिनिधि सभा पनि बिघटन गरिदिए। पुस ५ गतेदेखि नेकपा औपचारिक रुपमै फुटेपछि ओलीका अभिव्यक्ति एकदमै बिक्षिप्त भएका छन्। उनको कदमले नेपालको राजनीतिक इतिहास प्रतिगमनको दिशातिर धकेलिएको छ, संविधानमा प्वाल परेको छ। देश कुन अराष्ट्रिय गिरोहको पञ्जामा जाने हो भन्ने खालको गहिरो चिन्तामा डुबेको छ।
पुस ५ गतेयता ३ हप्ताको समयमा ओलीले गरेको भाषणमा कुनै पनि राजनीतिक गन्ध भेटिँदैन। उनले २१ दिनको समयमा जति पनि भाषण गरेका छन्, त्यहाँ गालीबाहेक केही भेटिँदैन। आफूनिकट अनेरास्ववियु, युवा संघ लगायतका संगठनहरुको भेलामा उनले प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठमाथि आगो ओकलेका छन्। अन्धसमर्थक पाएपछि हौसिने ओलीका पछिल्ला अभिव्यक्ति राजनीतिक क्षेत्रमा निकै विवादितसमेत भएका छन्। उनका अभिव्यक्ति सुन्दा बुद्धिजीवीहरु लाजले पानी–पानी भएका छन्।
पछिल्ला कार्यक्रममा ओलीका अभिव्यक्ति सरकार प्रमुखको हैसियतबाट व्यक्त हुने खालका देखिँदैनन्। उनले व्यक्त गरेका विचारले देशकै शीर निहुरिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको छ। अनेरास्ववियुको कार्यक्रममा प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लक्षित गर्दै ओलीले व्यक्त गरेको विचार अराजनीतिक भएकोमा नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले पनि निन्दा गरेका छन्। उक्त कार्यक्रममा ओलीले भनेका थिए, ‘‘बरु तपाईहरु मरेको भए श्रद्धाञ्जली दिन हुन्थ्यो, के भनेर सम्झिने।’’
सुदूरपश्चिमको भेलामा पुगेका ओलीले नेकपाका नेता भीम रावलको पनि अपमान गरे। उनले त्यहाँ ‘मैले संगठित गरेको केटो’ भन्दै रावलमाथि अराजनीतिक टिप्पणी गरेका थिए। सोही कार्यक्रममा ओलीले नेकपा छोरी–बुहारीको पार्टी नभएको भन्दै प्रचण्ड र उनको परिवारको योगदानमाथि छुद्र टिप्पणी गरेका छन्। उनले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘नेकपा छोरीबुहारीको पार्टी’ नभएको भन्दै राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्ड र उनको परिवारले गरेको योगदानको गम्भीर अपमान गरेका हुन्।
२५० वर्ष लामो सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रको स्थापना गर्न नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। प्रचण्ड मात्र होइन, नेकपा शीर्ष नेताको सहकार्य बिना नेपालमा यति ठूलो परिवर्तन हुन सम्भव नै थिएन। नेता, कार्यकर्ता र आम जनताको बलियो एकता र साथकै कारण ‘ओलीले बयलगाडा चढेर अमेरिका पुगिन्नँ’ भन्ने गरेको गणतन्त्र नेपालमा आइछोड्यो। त्यसको मुख्य श्रेय प्रचण्ड, माओवादी र संसदवादी दलका नेता–कार्यकर्ता, न्याय र लोकतन्त्रका पक्षधर आम जनतालाई जान्छ।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड मात्र त्यस्ता नेता हुन्, जसले आफ्नो सिंगो परिवारलाई युद्धमा होमेका थिए। जतिबेला माओवादी युद्धमा थियो, त्यतिबेला आफ्नो परिवारलाई राजनीतिकरण गर्नु, परिवारलाई पेशेवर कार्यकर्ता बनाउनु क्रान्तिकारी कदम मानिन्थ्यो। माओवादीकै वरिष्ठ नेताहरुका छोराछोरी विदेशमा पढाइरहँदा प्रचण्ड भने आफ्नी छोरी रेनु दाहाल र छोरा प्रकाश दाहाललाई युद्धमा होमेका थिए। उनीहरु मात्र होइन, प्रचण्ड पत्नी सीता दाहालले पनि जनयुद्धको सिंगो प्रक्रियामा अमूल्य योगदान गरेकी छिन्। यता बुहारी बिना मगर जनयुद्धकै क्रममा भैरवनाथ गणमा २७ महिना लामो कष्टकर यातना भोगेकी नेतृ हुन्। जनयुद्धमा सहभागी सबैको समुचित व्यवस्था भइसकेको छैन, यो कुरा मान्न सकिन्छ। तर, रेनु दाहाल र बिना मगरहरु बिना योगदान राजनीतिको यो उचाइमा पुगेका होइनन्।
जनयुद्धका कष्टकर दिनमा सम्पूर्ण जीवन क्रान्तिमा होम्दा उनीहरु कमरेड हुने तर अहिले शान्तिपूर्ण क्रान्तिको चरणमा उनीहरु छोरी हुने, बुहारी हुने, भाइ हुने ? यो संकिर्ण र पाखण्ड सोच हो। जसले सिंगो जिन्दगी राजनीतिक परिवर्तनका लागि खर्चिए, उनीहरु जनताबाट निर्वाचित भएर आउँदा टाउको दुखाउनुपर्ने कारण के ? ओली कमरेड, हेक्का राख्नुस्, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा रेणु र बिनाको योगदान तपाईको भन्दा बढी छ। किनकि तपाई राजतन्त्रको समर्थक हो, गणतन्त्रको विरोधी हो, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्रको विरोधी हो। तर, उनीहरु गणतन्त्रका योद्धा हुन्। सम्पूर्ण जीवन परिवर्तनका निम्ति समर्पण गरेका क्रान्तिकारीहरु हुन्। उनीहरुसँग तपाईको तुलना हुँदैन।
ओली कमरेड, तपाई आज गणतन्त्रको घाँटी निमोठ्दै हुनुहुन्छ। संघीयता अनावश्यक भन्दै हुनुहुन्छ। जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सी भन्दै हुनुहुन्छ। संविधानको गला रेट्दै हुनुहुन्छ। तर, हेक्का राख्नुस्, प्रचण्ड, रेनु र बिनाहरुले नलडेको भए कि तपाई ज्ञानेन्द्रको जेलमा हुनुहुन्थ्यो कि दरबार पसेर राजाको भक्त भइसक्नुहुन्थ्यो। गुमनाम केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने तिनै योद्धाहरुको अपमान गर्ने नैतिक अधिकार तपाईसँग छैन।
तीन वर्षको अवधिमा तपाईको सरकारबाट भ्रष्टाचारका जति काण्ड भए, ती सबैले देशको शीर नै झुकाएको छ। तपाईलाई ‘बा’ भन्नेहरुले देश यसरी लुटेका छन् कि त्यसरी त राणा र राजाहरुले पनि लुटेका थिएनन्। आज देश भ्रष्टाचारको अग्रसूचिमा उभिएको छ। यसमा तपाईका छोराछोरी नै अग्रपंक्तिमा छन्। अढाइ वर्षको अवधिमा तपाईले गरेका सयौं नियुक्तिमध्ये कि तपाईका आफन्त छन् कि झापाली छन् कि तपाईका आसेपासे छन्। अरु कोही देखाउन सक्नुहुन्छ ? नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङजस्तो योग्य प्रशासक हटाएर अयोग्य सालो नियुक्ति गर्ने र देशमा फेरि लोडसेडिङ गराउन खोज्ने खलनायक तपाई नै होइन र ? तथ्य ठूलो कि कूतर्क ? तथ्यले तपाई नेपालको सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री भएको कुरा प्रमाणित भइसकेको छैन र ?
अन्त्यमा लेखक मनहरि तिमिल्सिनाकै शब्द सापटी लिएर भन्न चाहन्छु, ‘‘प्रचण्ड पनि कमजोरीरहित नेता होइनन्, सुधार्नुपर्ने विषय छन्। तर, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा प्रचण्डसँगै नेता(कार्यकर्ता, छोरी(बुहारी, आफन्त र जनताको पनि योगदान छ। ओली कमरेड ! प्रचण्डका घनिष्ठहरुले तपाईलाई ’बा’ भन्नेहरुले जस्तै यती, ओम्नी, वाइडबडी, मेडिकल उपकरण, सेक्युरिटी प्रेस आदि नाममा अर्बौं लुटेका पनि त छैनन्। तपाईं र तपाईंका आफन्त राजतन्त्र समर्थक भए भन्दैमा अरुको निन्दा किन ? तपाई निसन्तान हुनुमा प्रचण्डको के दोष ?’’
हो, दुनियाँलाई थाहा छ, तपाई निसन्तान हुनुहुन्छ। त्यसैले तपाईलाई सन्तानप्रति कुनै मोह पनि छैन। तपाईका आफन्तको राजनीतिमा खास योगदान पनि छैन। तैपनि तपाईका सयौं छोराछोरीले देश निर्वाध लुटिरहेका छन्। तपाईले देशलाई आफन्तको भर्तीकेन्द्र बनाउनुभएको छ। सत्ताको नियुक्तिमा झापाली र अराजकहरुलाई छानीछानी हालिरहनुभएको छ। त्यसमा इमान्दार र क्रान्तिकारी आफन्त र झापाली परेका छैनन्। जो इमान्दार छन्, ती अपमानित छन्, जो भ्रष्ट छन्, ती तपाईका प्रिय छन्। देशमा यस्तो ब्रह्मलुट मच्चाएर अरुलाई उपदेश दिने तपाईको नैतिकता के ? तपाईका सन्तान नभएको कुण्ठा प्रचण्डमाथि पोखेर तपाई कुन संस्कृति स्थापित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ ? सारा नेपालीले जवाफ चाहन्छन्। – कमल रिजाल